ကုန်ပစ္စည်း အကူအညီနှင့် ပံ့ပိုးရေး | Samsung Myanmar
ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းချက်အားရရှိရန် ပိုမိုလျှင်မြန်စေပါလိမ့်မည်
သင်ရှာဖွေနေသည့်အဖြေအား မတွေ့ရှိသေးပါက ကျွနု်ပ်တို့အား အီးမေးလ်ပို့ရန် နောက်သို့ ကိုနှိပ်ပါ
အဆင့်၃- Email ပို့ပေးပါ
ကုန်ပစ္စည်း အကူအညီနှင့် ပံ့ပိုးရေး သတင်းများ
ကျွန်ုပ်တို့၏Samsungချစ်သူများအတွက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (Covid-19)နှင့်သက်ဆိုင်​သော အသိ​ပေးချက်များ
အာမခံသက်တမ်းနှင့် အာမခံစားခွင့်များကို သိရှိပါသလား?
Samsung ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အသိပေးချက်များကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Samsung ဖုန်းသို့ အရင်ဖုန်းအဟောင်းမှ ဖုန်းနံပါတ်များ ၊ ဓာတ်ပုံများစသည်တို့အား မည်ကဲ့သို့ရွေ့ပြောင်းရမည်ကို သိရှိလိုပါသလား ?
Softwareဆိုင်ရာအကူအညီများကို Call Centerသို့ ဖုန်းခေါ်ဆို၍ တိုက်ရိုက်အကူအညီရယူနိုင်သောဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
Samsung SmartThings အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ (Android နှင့် iOS အတွက်)
ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးစွဲခြင်း နှင့် အားသွင်းခြင်းတို့ဖြင့် သင်၏ဘက်ထရီကိုမည်သို့ ပိုကောင်းကောင်း စောင့်ရှောက်နိုင်ပုံအကြောင်းကို ကြည့်ရှုပါ။
သင့် Samsung အကောင့်ကို လုံခြုံအောင် ထားပါ
နှစ်ဆင့် စစ်ဆေးအတည်ပြုမှုကို သတ်မှတ်ပါ. ဆိုင်းအင်ဝင်ရန် သင့်စကားဝှက်နှင့် အခြား အတည်ပြုနည်းကို သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့် သင့်အကောင့်ကို ကာကွယ်ပါ။
Galaxy Z Flipအသုံးပြုလမ်းညွှန်
Useful guide for Home Appliances
Galaxy Note20 ၏​အားသာချက်များ
Samsung Myanmar Contact Center၏ ၀န်ဆောင်မှုအချိန်အား ပြောင်းလဲ ကြောင်း အသိပေးခြင်း
Samsung Myanmar Contact Center၏ ၀န်ဆောင်မှုအချိန်အား မေလ ၁ ရက် နေ့မှစတင်၍ မနက် ၈ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီသို့ပြောင်းလဲထားကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်။ Samsung ၀န်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သိလိုသမျှကို Samsung Contact Center 01- 2399888 ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သလို Samsung Members နှင့် Live Chat တို့မှလဲ နေ့စဥ်ပိတ်ရက်မရှိ မနက် ၈ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီ အတွင်းမေးမြန်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။